Ulawulo oluphumelelayo lokuthumba (hyperhidrosis)
Ukukrokra yinkqubo yemvelo, enye yeendlela ezenziwa ngumzimba kwi-thermal okanye ezinye iziphumo. Xa kuziwa kwi-hyperhidrosis, imeko iyatshintsha. Ukukhukhuma ngokugqithiseleyo kutshabalalisa imizwa, kudala ukuzithemba, kubangela ezininzi iingxaki, kunokubangela ukuba uxinzeleleke. Ungayinyamezela njani le ngxaki uze uphinde uzithembe?
Ulwimi lwesayensi, "i-hyperhidrosis" yimeko ebonakaliswe ngokunyuka okanye ukukhukhuma ngokweqile. Kule meko, ingaba yiprayimari (idiopathic), evela ngaphandle kwesizathu esicacileyo okanye sesibini, okuyiyo impawu yonyango. Okokuqala, ukwandiswa ukujuluka kubonakala kubantu abakhathazekile okanye kusabela ekunyuseni kweqondo lokushisa kwimeko yangaphandle. Kukho isibalo sezifo ezibangelwa i-hyperhidrosis, kwindawo yokuqala, ezi ngxaki ze-endocrine, kunye nezifo ezithathelwanayo kunye ne-ecological, kunye neengxaki ekusebenzeni kwenkqubo ye-nervous. Ngokuqhelekileyo, i-hyperhidrosis inomsindo wokuthatha amachiza athile.
Ukuxazulula ingxaki ye-hyperhidrosis idinga indlela epheleleyo. Njengoko unyango lweziyobisi luchaza iindidi okanye izixilongo, i-beta-blockers, kunye ne-holinoblokatory. Ukugqithiswa kwamanqanaba e-cosmetology kubangelwa i-toxin ye-botulin A (iBotox, iDysport). Umsebenzi wabo "kukuthintela" iimpembelelo zesifo esivela ebuchosheni ukuya kwiingqungqungqungqungqungqungqungqungqungqungqungqungqungquthela. Inkqubo ngokwayo isebenza kwizigaba eziliqela: kuqala, i-anesthesia yenziwa, ngokuqhelekileyo, isicelo, kunye nokusetyenziswa kweemveliso zamathambo okanye iiprafu, nangona iilenki zisetyenziselwa iinaliti ezincinci. Emva kokonyango kwesikhumba ngesisombululo se-antiseptic, oyingcali uqhubeka nokulawulwa kokulungiselela. I dose ibalwa kwiiyunithi, ngokuthe ngqo, kwaye kuxhomekeke ekuxineni kwe-hyperhidrosis, kwakunye neendawo zokuhlala zanda. Isiphumo sonyango sikhula ngaphakathi kweentsuku ezi-3 emva kokulawulwa, umphumo omkhulu usenzeka malunga neveki kamva. Ukuba inkqubo iya kwenziwa ngokufanelekileyo, unakho ukulibala ngeengxaki ze-hyperhidrosis ezinyangeni ezingama-6 ukuya kwe-12, ngoko iichiza lidlulayo, kwaye iilisi zingaphinda ziphindwephindwe, kodwa musa ukuzenza ngokuphindaphindiweyo ngaphezu kweenyanga ezili-9 ukuya kwezi-12.
Indlela yokwenza unyango lokugqibela lwe-hyperhidrosis yinkqubo engaphantsi kwendlela yokuphathwa kwelase-axilary zones, ngenxa yoko i-sweat ye-sweat ephule ngokupheleleyo ize ichithe. Le ndlela ikhuselekile, eyenziwa phantsi kwe-anesthesia yendawo kwaye ayifuni ukulaliswa esibhedlele.
Ngokungathandabuzekiyo, xa ukhetha indlela yokunyusa ukujuluka okukhulu, uqeqesho logqirha ludlala indima enkulu. I-ExpertSlinics inezo zonke iingenelo: iziqinisekiso eziphezulu zabasebenzi, ukusetyenziswa kobuchwepheshe obutsha, amalungiselelo anamhlanje kunye namanqanaba aphambili avumela ukubonelela ngokukhuselekileyo nokuqinisekisa isiphumo esihle kakhulu.
Ixabiso: ukusuka kuma-ruble angama-20 000.
Abafownelwa: (495) 649 - 92 - 26
Ukuhlaziywa ngamanyathelo omntu
Kunokuba i-hardware yocwecwe yokucoca
Indlela yokujamelana nephunga lokukhupha kwi-armpits
Izindlela ezisisiseko zokususa iidoti
Inzuzo kunye nengozi yokusebenzisa i-solarium
Ukukhishwa kweenwele zeLaser kunye ne-photopilation
Indlela ilinen: imveliso yokunyamekela yomzimba ekwindla
Xa imali engeyona nto ephambili
Ukungqinelana kobudlelwane bezoshishino
IJam esuka kwi-cherry (Kiev)
Ukutya ama-pancake emanzini: iindlela zokupheka ezingcono kwiipakeki
I-pâté yehlobo kunye neergetgettes
Ummandla wephupha: ingubo yangaphambili kwi-prom 2016
Iprogesterone engakwazi ukukhulelwa
Indlela yokuthatha iipilisi zokulawula ukuzalwa?
Unonophelo lwezonyango zokulimala kwezemidlalo
UKasha semolina kwi-seminary
Indlela yokufundisa umntwana ukuba avuke kusasa
Iinkqubo zokukhusela ezibandayo ebusika